COVID waxa uu dardar gelinayaa beddelka xayaysiiska TV-ga oo u beddelaya dhexdhexaad wax laga qaban karo | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/COVID waxa uu dardar gelinayaa is beddelka xayaysiiska TV-ga oo u beddelaya dhexdhexaad wax laga qaban karo
COVID waxa uu dardar gelinayaa is beddelka xayaysiiska TV-ga oo u beddelaya dhexdhexaad wax laga qaban karo
Markay timaaddo beegsiga xayaysiiska iyo u-jeedinta, Connected TV (CTV) waxay garaacdaa TV-ga dhaqanka si walba. Marka laga eego dhinaca xayeysiiyaha, si kastaba ha ahaatee, caqabaddu waxay ahayd mid miisaan leh. Taasi hadda waxay u muuqataa inay si degdeg ah isu beddelayso.
CTV, oo ay ku jiraan OTT (kormeerka ugu sarreeya), ayaa si joogto ah u korayay sannado. Laakiin COVID-19 ayaa wax walba si weyn u dardar geliyay.
U diyaar garowgeeda. Maamulaha Simpli.fi Frost Prioleau ayaa tilmaamaya madal uu isagu leeyahay oo caddayn u ah kobaca warshadaha. "Waxaan la socodsiinay in ka badan 20,000 oo olole CTV ah in ka badan 5,900 xayaysiisyo gaar ah ilaa hadda 2020." Taasi waa 43% sanadka kobaca tirada ololaha iyo korodhka 17% ee xayaysiisyada.
"Waxay u yimaadaan beegsiga waxayna u joogaan sifo," ayuu eegayaa. Xayeysiyayasha, gaar ahaan summadaha, sida CTV sababtoo ah waxa ay bixisa saamaynta muuqaalka iyo shucuureed ee telefiishanka iyada oo la cabbirayo warbaahinta dhijitaalka ah.
Isha: Deloitte sahanka macaamiisha (2020)
Beegsiga saxda ah iyo sifaynta. Prioleau waxa ay tibaaxday kartida CTV u leedahay in la beegsado oo kala saaro dhagaystayaasha wax laga qaban karo iyadoo la isticmaalayo xogta dhaqaalaha qoyska, iyo sidoo kale goobta ku salaysan xogta habdhaqanka iyo ujeedada. Bartilmaameedku wuxuu noqon karaa mid guud ama sax ah oo ku salaysan habdhaqanka dhabta ah. Ololaha waxaa lagala socon karaa onlayn ama bannaanka, oo ay ku jiraan taraafikada mareegaha, beddelka ganacsiga e-commerce iyo booqashooyinka dukaamada jirka.
Sida dhammaan beegsiga saxda ah, waxaa laga yaabaa inay khusayso macaamiisha, laakiin aad ayay u adag tahay haddii aad tahay suuqgeyn. (Prioleau wuxuu leeyahay sirta macmiilka waxaa lagu ilaaliyo goobta.)
Prioleau waxa kale oo uu sharaxay xayaysiiyayaasha ay sidoo kale bartilmaameedsan karaan nooca aaladda iyo cabbirka shaashadda: kormeerayaasha waaweyn (TV-yada), PC-yada iyo aaladaha gacanta. Suuqgeeyayaashu waxay ka saari karaan shaashadaha iyo noocyada aaladaha sidoo kale. Waxa uu ii sheegay in xayaysiiyayaasha TV-ga dhaqameedku ay u janjeeraan inay "u roonaadaan shaashada weyn," halka "Xayeysiiyeyaashu ay rabaan shaashado yaryar."
Kobaca is-diiwaangelinta iyo daalka. Marka loo eego sahan ay samaysay la-talin Deloitte, macaamiishu waxay kordhiyeen tirada madadaalada iyo adeegyada is-diiwaangelinta fiidiyowga ee OTT ee ay bixiyaan inta lagu jiro COVID-19. Ku dhawaad ​​80% macaamiisha Mareykanka ayaa sheegay in ay haystaan ​​ugu yaraan hal fiidiyow, marka la barbardhigo 73% ka hor inta uusan coronavirus dhicin.
Laakin suuqa CTV/OTT wuu ka duwan yahay oo wuu ka isbedel badan yahay TV-ga cable-ka. Waxaa jira heerar sare oo badan oo soo noqnoqonaya oo ah macaamiishu oo jaban marka ay macaamiishu la kulmaan "daalka is-diiwaangelinta." Taasi way korodhay markii istuudiyoo badan iyo shabakado ay bilaabeen adeegyo baahinta lahaanshaha ah.
Dadka qaarkiis, jawaabta daalka isdiiwaangelinta waa nuxur la kabo. Deloitte waxay ogaatay in isticmaalayaasha CTV ay muujiyeen heerar kala duwan oo xiisaha iyo dulqaadka xayeysiisyada, in kasta oo badidoodu ay xiisaynayeen.
In ka yar saddex meelood meel (35%) daawadayaasha, gaar ahaan isticmaalayaasha da'da yar, ma aysan rabin wax xayeysiis ah. Daawadeyaashii hore (Baby Boomers iyo wixii ka wayn) waxay door bideen moodeelka kaliya ee xayeysiisyada lacag-ururinta. "Si kastaba ha ahaatee, dhammaan macaamiishu waxay leeyihiin dulqaad xayeysiis ah oo u dhexeeya toddobo iyo 14 daqiiqo saacaddii. Intaa ka dib, way soo baxayaan, "Deloitte ayaa sharraxay.
Sababta aan u danayno. Muddo sanado ah suuqgeynayaashu waxay ka hadlayeen "TV-ga wax laga qaban karo." Waxay ku timid qaab OTT/CTV ah. Hadda miisaankii TV-ga dhaqanka ayaa isna soo gaadhay. Tani waxay saaraysaa cadaadis aad u badan ama waxa loogu yeero TV-ga toosan sida bartilmaameedka iyo sifaynta wanaagsan, iyo sida loo malaynayo qiimihiisu ka fiican yahay iyo hufnaanta weyn, waxay u soo jiidataa xayeysiiyeyaal sumad badan CTV.
Kordhinta cabbirada dhagaystayaasha CTV iyo agabka xayaysiiska ee la heli karo ayaa helay dareenka xayaysiiyeyaasha badan ee Q2. Laakiin waxaa laga yaabaa inay weli jirto faa'iido hore u dhaqaaqe oo u hadhay kuwa ku booda, halkii ay sugi lahaayeen ilaa tartanku sii xoogaysanayo si loogu tijaabiyo CTV.
Google ma ixtiraamaa aaladaha cabbiraadaha URL?
4 dariiqooyin caadi ah oo la iska ilaaliyo markaad la shaqaynayso qorayaasha madax-bannaan [Muuqaal]